Madaxweynihii 8’aad Ee Iiraan..Maxaa Laga Filayaa? | Xaqiiqonews
Madaxweynihii 8’aad Ee Iiraan..Maxaa Laga Filayaa?
Ibraahim ra’iisi ayaa loo doortay madaxweynaha Iiraan doorashooyinkii madaxtinimo ee dalkaasi ka dhacay, waxaa kale oo barbar socday doorashooyinka deegaanka ee golaha Islaamiga.
XAQIIQO NEWS- WARARKA DIBADDA
Ibraahim Ra’iisi ayaa lagu tirayaa in uu ka mid yahay kooxaha mayalka adag ee taabacsan “kacaanka islaamiga Ee Iiraan” , waxaana xusid Mudan in awoodda Madaxweynaha Iiraan aysan aheyn “mid iska deysan”, waxaa jira madax iyo guddiyo ku shuql leh dajinta siyaasadaha iyo go’aanada qowmiga ah.
Siyaasadda Arimaha dibadda Ee Iiraan waa mid aan isbadalin mudadii afartankii sano ee ugu dambeysay sidaa darteed madaxweynaha lagama sugaayo isbadal dibadda ah
Sanadkii 2017, Ra;iisi ayaa isku sharxay xilka madaxweynenimo, isaga oo tartan la galay Xasan Ruuxaani.
Sanadkii 2019, Hogaamiyaha ruuxiga ayaa Ra’iisi u mgacaabay gudoomiyaha garsoorka.
Sidoo kale Aqri: Yaa Guuleytay: Iiraan Mise Mareykanka?
Xilkaasi intii uu haayey Ra’iisi waxa uu sameystay sumcad , waxa uuna masuq maasuq kula xisaabtamay hogaamiyaal iyo madax caan ah.
Balan qaadkiisii Caanka Ahaa
Intii uu ka jiray olalahiisa doorashada, waxa uu ninkani booqday dhammaan 32-ka gobolka ee Iiraan ka koobantahay, waxa uuna sameeyey balan qaad dadka soo jiitay, isaga oo sheegay in uu horumarin doono gacansiyada gudaha xilli Iiraan ay la halgameyso cunaqabateynta Mareykanka.
Ra’iisi intii uu haayey garsoorka, Iiraan waxa ay mamnuucday ablikeeshinka caanka ah ee “signal”, sidoo kale waxaa la mamnuucay ablikeeshinka wada sheekeysiga codka ah ee “clubhouse”.
Dhammaan ablikeeshinada baraha bulshada waa mamnuuc Iiraan gudaheeda marka laga reebo Whatsapp iyo Instgram.
Dhaqaalaha iyo Heshiiskii Nukliyeerka
Intii uu ku jiray ololaha Ibraahim Ra’iisi waxa uu sheegay in uu aad ula dagaalami doono sicir bararka, isaga oo sheegay in ugu yaraan uu abuuri doono hal milyan oo shaqo sanadkii.
dhanka kale wareegii lixaad ee wadahadalada u dhaxeeya Iiraan iyo dowladaha reer galbeedka ayaa lagu wadaa in uu ka qabsooma Vietnam, hadii wada hadalkaasi miro dhalo, Mareykanka ayaa cunaqabateynta ka qaadi doono , halkan Iiraan ay hoos u dhigi doonto barnaamijkeeda Nukliyeerka.
Iiiraan ayaa dhawaan bacraminta Uranium-ta kor u qaaday 63%, waana sara kicii ugu sareeyey ee waligeed ay Iiraan sameyso.